Rakotoarivelo Patricia Voafidy ho masoivoho hitondra ny marika Curvy Chic Fashion
Inona no tena tsy hahafoizanao an’i Dada ?
Ny alahady izao no hankalazaina ny fetin’ny ray, izay andro natokana hahatsiarovana an’i Dada.
Misafidy vehivavy toy ny reniny tokoa ve ny lehilahy sa inona no critères tena hisafidianany ny vehivavy iray hiaraka aminy?
Lillio Ludovic : Raha ny hevitro manokana dia tsy misafidy vehivavy mitovy amin'ny reniny ny lehilahy fa izay ho vadiny mihitsy no efa manana ny toetra mitovitovy amin'ny reniny.
Inona no ranomanitra mety amin’i Dada ?
Efa ho avy ny andro atokana hahatsiarovana ny raim-pianakaviana. Azo atao tsara ny manolotra ranomanitra ho azy, saingy mila fantarina mialoha ireo karazany izay mety aminy.
Lucie : Numéro 1 Ø Nom : Lucie Bouticourt Ø Age : 18 ans
Ø Classe et établissement : Terminale, Lycée Français de Tananarive Ø Selon toi, quelles sont les qualités que doit avoir une miss high school ? Etre un exemple pour les lycéennes de son pays.
VELOMA FARANY AN’I MITCHOU AMY
Nanam-paniriana te hanana asa matotra ho azy manokana i Miarintsoa Andriambolatiana, ankoatra ny maha mpanakanto matianina azy tao amin’ny tarika Kala Vazo.
Ilaina ihany ve ny manafina zavatra amin’ny olon-tiana ?
Rakotoarivelo Patricia, tovovavy 24 taona, no voafidy ho endrika anehoana sy hitondra ny marika Curvy Chic Fashion. Tamin’ny sabotsy 22 desambra lasa teo no nanatanterahana ny lanonana « Curvy Night »,
izay nampisehoana an’ireo andian’akanjo voalohany novokarin’ity marika ity, no sady nampahafantarana ihany koa an-dRakotoarivelo Patricia. Raha tsiahivina dia i Kelhie Razafiasimalala no mpamorona ny marika Curvy Chic Fashion. Miompana amin’ireo vehivavy botabota sy sokajiana ho ngeza ity marika ity, mba hanomezana vahana an’ity bika ity, izay manana ny mahatsara azy ihany koa. Teny amin’ny Suite 101 Antaninarenina moa no nanatanterahana an’ity hetsika ity. Raha ny tantaran’ny fiforonan’ny Curvy Chic Fashion dia niainga tany amin’ny fahazazan’i Kelhie Razafiasimalala mihitsy. “Nanana “cousine” dongadonga izay aho, ka tsy mba nahazo akanjo efa vita zaitra, toy ny anay ankizy rehetra izy, rehefa Krismasy, fa nanjairan’ny bebenay an’ireny akanjo didy mananjara be ireny. Nitomany izy, noho izany, ka nilaza taminy aho hoe : rehefa any aoriana any aho dia hanamboatra akanjo mety amin’ny bikandry, ary dia notanterahiko tokoa izany”, hoy i Khelie mitantara. Ny 22 desambra moa no tsingerin-taona nahaterahan’io rahavavin’i Kelhie Razafiasimalala io, datin’andro nosafidiany ihany koa mba hampisehoana voalohany an’ireo sangan’asany.